Reysal wasaarihii Hore Ee Somaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo Ka Degay Amsterdam ( Holland:- | Calanka Somalia
← FARMAAJO oo laga cabsi qabo in Maxkamad Caalami lasoo Taago”War Culus
Danjire Mahiga “Puntland hadeysan jirin lagama gaareen wax heshiis ah shirarkii Garoowe lagu qabtay” (HADAL DAD BADAN KA YAABIYEY) →
Reysal wasaarihii Hore Ee Somaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo Ka Degay Amsterdam ( Holland:-
Raisal wasaarihii hore ee DFK , Mahamed Cabdilaahi farmaajo iyo wafdi culus oo uu hogaaminyo ayaa maanta ka degay magaalada madaxda wadanka holland kadibna uga gudbay Denhaag, waftiga RW Hore ayaa booqashooyin hore ku soo maray jaaliyadaha somaliyeed ee dibada gaar ahaan kuwo yurub iyo ameerika isagoo ka jawaabayey codsi ay jaaliyada somaliyeed ee dibadaha , gaarahaan wadanka Holland uga codsadeen inuu ku yimaado dalkaas ay deganyihiin ugana warbixiyo dalkii iyo siyasadiisa mustaqbalka . Waxaa halkaas RW si diiran ugu soo dhaweeyey jaaliyada somaliyeed ee Holland. Gaarahaan haweenka , dhalinyarada iyo aqoonyahada somaaliyeed ee xiiso aan la oo koobi Karin u qabay aragtida RW farmaajo.
Waxaa kale oo dad goobjoog ah inoo cadeeyeen in taageeryaal badan oo xamaasadeeysan ay ka kala yimaadeen wadamada belguim iyo Jarmalka. Mudane farmaajo ayaa hore u soo maray wadamada ingiriiska , Sweden iyo Norway. Wararka la isla dhexmaraayo ayaa sheegaya in Farmaajo laga filayaa inuu bilaha soo socda ku dhawaaqi doono gole dhexe iyo xisbi siyaasadeed oo ka shaqeeya danaha ummada soomaaliyeed isla markaasna dhibaatada ka saara shacabka soomaliyeed ee dagaaladu halakeeyeen 22 sano ee la soo dhaafay. Wararkaas waxaa kale oo ay sheegayaan in maalmaha soo socda ay wafdiga ku soo biiri doonaan. Qaar ka mid ah siyaasiyiin somaliyeed , iyo qaar ka mid ah golihiisii wasiirada ee TAYO.
Mudane RW farmaajo lagu tiriyaa inuu yahay hogaamiyeyaasha soomalida kuwo kugu sumcadda badan isaga iyo wasiiradii tirade yaraa ee tayada badnaa. Waxaa lagu xasuustaa qariidadii uu u jeexay dawlad somaliyeed ee ugu horeysay ee karti u yeelata hanashada , dowlanimo , iskuna xirta shacabka , ciidanka iyo dowladnimda , waxaa tilmaamaa in ay shacabka tustay in Somali wax qabsan karto sida maamulka , nabadgelyada iyo amni ee dowladii uu hogaaminaayey. Tasoo dhaxalsiisay in alshabaab laga qabsado muqdisho iyo in hayadaha caalamiga ahi u soo guuraan magaala madaxda . farmaajo ayaa la sheegayaa in markii uu wadatashiyo aad looga taxadaray oo wax badan ka sameeyey taageerayaashiisa dalka gudihiisa iyo dibadiisa inuu cadeeyn doono mustaqbalkiisa siyaasadeed iyo goaankiisa kama danbeeysta markaan wixii ka danbeeya gabagabo ku dhow.
Wixii war ah ee cusub ee xafladaas ku saabsan waan idiin soo gubdin doonaa hadii ilaaheey naga ogolaado.